Ukuthelekisa ii-apile kwii-Orenji, iPodcasting kwiBlogging | Martech Zone
I-Nielsen ngokuthelekisa ii-apile neeorenji, iPodcasting kwiBlogging
NgoLwesine, Julayi 13, 2006 NgoLwesibini, Julayi 4, 2017 Douglas Karr
Njengongeniso lwam lwangaphambili kwi 'iityhubhu' ukugcwalisa kwi-intanethi, kuhlala kundimangalisa xa abantu abathi baziingcali bema kwaye bethetha into ebubudenge. Nielsen Kutshanje kukhutshwe uthelekiso lwabasebenzisi bePodcast kuBlogging. Olu luthelekiso olungaqhelekanga. Abasebenzisi bePodcast ngabathengi, kwaye iibhlog zeboneleli. Zihambelana njani emhlabeni? Kuba bobabini basebenzisa i-intanethi? Omnye umzekelo wendlela amajelo eendaba aqhelekileyo akanalo nofifi…
Kwinqaku elifanayo, ndikhankanyiwe Ibhlog kaSeti emva kwengxoxo yee-ABC's (Audit Bureau of Circulation) imithetho eguquguqukayo eyenza ukuba amaphephandaba afumane amanani angcono ngelixa ukuhanjiswa kuqhubeka ukuhla.
tags: uphicotho-zincwadi lokujikelezabloggerukuhla kwephephandabaipodcast epapashaabasebenzisi bePodcastPublishinguSeti uthixo
Ucotha Unxibelelwano lweIntanethi? Yimibhobho egcwalisayo!
I-Clog's Dell's (Clogging = Blogging Corporate)
UNeal G Moore
Mar 21, 2007 ngo-4: 40 AM
Ndicinga ukuba inqaku lokucaciswa liyafuneka ngokubhekisele kumagqabantshintshi kwii-apile-to-orenji. Ewe, ngelixa abaphulaphuli kwii-podcast ngabathengi, kwaye ababhali kweeblogi ngabavelisi, ayinyani na ukuba kwabayili Ngaba ii-podcast ngabavelisi? Ukuba le logic iyasebenza (kwaye ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba kunjalo) ukuthelekiswa kweNielsen ngokusekwe kwiintlobo ezahlukeneyo zabavelisi, okanye iintlobo ezahlukeneyo zabathengi kubonakala kufanelekile. Ndiyavuma ukuba andikaluboni uphando olwenziwe nguNielsen othe wabhekisa kulo, kodwa ndikrokrela ukuba ukuthelekiswa kwabo akuzange kunqamlezwe njengoko usitsho. Ewe, amajelo eendaba aqhelekileyo ahlala engayifumani xa kufikwa kumxholo ohanjiswa yiWebhu, kodwa ndicinga ukuba kule meko ukugxeka kwakho kubukhali kakhulu.
Mar 21, 2007 ngo-6: 52 AM
Kukho ikhonkco kwi Nielsen inqaku kule posi. Nantsi inkcazo: "Abantu abaninzi bakhuphele ipodcast mva nje kunokuba bepapashe ibhlog okanye bazibandakanya kwezobuchwephetsha, ngokutsho kwesifundo esitsha esenziwe nguNielsen // NetRatings."
Ndimi ecaleni kwee-apile ukuya kwiiorenji… alunakuthelekiswa nanto. Ndiyayibulela into yokuba umile kwaye uphawule, nangona! Ndiqinisekile ukuba uyakufumana itoni eyoyikeka ngakumbi kwindawo yam kuneNielsen. 🙂